Rikoodhida Tareenka Dunida ee 5 | RayHaber
HomeDUNIDAAFRIKA27 Koonfur AfrikaDiiwaanka-jabsiga Dunida Qaaska ee 5
15 / 11 / 2019 27 Koonfur Afrika, 81 Japan, 86 Shiinaha, 91 Hindiya, AFRIKA, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline
Tareenka ugu dhakhsaha badan adduunka
Tareenada, oo ka mid ah gaadiidka dadweynaha ee ugu da'da weyn adduunka, ayaa nolosheena ku jiray qarniyo badan. Kobcinta iyo beddelka tareennada tikniyoolajiyadda kobcinta ayaa inta badan la door bidaa marka loo eego labadaba rarka iyo rakaabka. Waxaan soo bandhigi doonaa shan ka mid ah tareenka ugu gaarka ah garoonka dhexdiisa.
1. Tareenka Dunida Ugu Caansan
La kulan Rovos Rail, tareenka ugu raaxada badan adduunka. Rovos Rail, oo ahaa tareenka ugu raaxada badan adduunka tan iyo markii uu booqashadii furitaanka ee 1989, wuxuu ka shaqeeyaa Koonfurta iyo Bariga Afrika. Rovos Rail, oo sidoo kale loo yaqaan 'Pride of Africa', wuxuu martida u siiyaa fursad ay ku waayaan khibrad u gaar ah oo ku saabsan raaxada, raaxada iyo adeegyada shaqsiyadeed. Tareenkan aadka u raaxada badan kaliya maahan mid tayo leh, laakiin wuxuu sidoo kale muujinayaa quruxda dabiiciga ah ee Afrika marka loo eego dariiqa ay u safarto. Tareenka raaxada leh, oo bixiya qolal qofeed oo gaar ah, cunto aad u ballaaran iyo cabbitaan cabbitaan iyo adeeg aan xadidneyn, ayaa sidoo kale leh guryo waaweyn oo firfircoon iyo goobo lagu daawado. Rovos Rail, oo qaadi kara ugu badnaan rakaabka 72 ee ku yaal hoolka martida, ayaa sidoo kale leh naqshad gudaha ah oo heer sare ah. Kumaa doonaya inuu ku safro tareenkan aadka u raaxada leh?
Tareenka Dunida Ugu Caansan
2. Tareenka ugu dhakhsaha badan adduunka
Ta ku xigta waa tareenka ugu dhakhsaha badan adduunka. Intooda badan badiyaa waxaad moodaa inuu tareenkan xawaaraha sare kujiro yahay Japan. Si kastaba ha noqotee, tareenka ugu dhaqsiyaha badan adduunka wuxuu ku yaal Shiinaha. Tareenka Shanghai Maglev wuxuu safrayaa 8 km saacaddii, isagoo u safraya $ 429 qofkiiba. Tareenka, oo aan ku safrin magaalada, ayaa ka dhoofaya garoonka diyaaradaha Pudong ee Caalamiga ah ee Shanghai kuna socda saldhigga tareenka dhulka hoostiisa ee Longyang. Tareenkan xawaaraha sare leh, ee ay Shiinuhu ku faani karaan, ayaa dhameystiraya wadada '30-km' oo kaliya daqiiqadaha 7. Shanghai Maglev dhab ahaan uma aqoonsana tartamayaasha marka loo eego xawaaraha.
3. Tareenka Dunida Ugu Badan
Wadankee u maleynaysaa inuu yahay tareenka ugu dadka badan dunida? Sida inbadan oo idinka mid ah aad filan doontaan, tareenka ugu mashquulka badan adduunka waa Hindiya, oo ah waddanka labaad ee ugu weyn adduunka. Hindiya, rakaabka sannadlaha ah ee tareenka 7,172 ee ku xiran xarunta waddanka ee 9991 oo dhan waa qiyaastii 8421 milyan oo qof. Tirada rakaabka lagu qaaday wadooyinka tareenka ayaa ka badan xitaa tirada dadka wadamada qaarkood. Maalin maalmaha ka mid ah, tareenada Hindiya waxay wataan in kabadan 25 milyan oo rakaab ah, in kabadan tirada dadka Australia. Sawirada jidadka tareenka, dadku waxay ku dhaweynayaan noloshooda si ay ugu raacaan tareen. Qariqda ka socota tareenka, dadka arka sawirada dadka tareenka raacaya ayaa yaabay qofkasta. In kasta oo safarka tareenku caan ku yahay waddanka, awoodda tareenadu ma la kulmaan dadweynaha. Sababtaas awgeed, waa wax iska caadi ah in lagu safro iyadoo la sudho ama lagu dhejiyo albaabbada. In kasta oo sawirradan ay u keenaan la yaab adduunka oo dhan, haddana waxaa loo tixgeliyaa inay qayb ka yihiin nolol maalmeedka Hindida.
Tareenka Dunida Ugu Badan
4. Tareenka ugu dheer adduunka
Tareenka ugu dheer adduunka waxaa iska leh shirkadda BHP Iron Ore, oo ah shirkad macdanta birta ka shaqeysa oo ka shaqeysa Port Hedland, Australia. Isugeynta dhererka tareenka waa 7,353 km. Xariga oo dhan wuxuu ka kooban yahay wadiiqooyinka 682 waxaana lagu jiiday xawaaraha 8. Gawaarida kasta wuxuu leeyahay 6000 faras guud oo Generaal AC AC ah. Xamuulka 82.262 tan ayaa la qaadi karaa hal waqti oo culeyska culeyskiisu yahay 100.000 tan.
Tareenka ugu dheer adduunka
5. Saldhig Tareen oo leh Rakaab Rakaab ah
Miyaad u malayn in gobolku wado khadka tareenka u furan yahay si aan muwaadin keli ahi dhibbane u noqon? In kasta oo ay tani u muuqato wax aan macquul ahayn in badan oo idinka mid ah, waxay ku dhacday Japan. Tirada dadka imanaya xarunta tareenka ee jasiiradda Hokkaido, oo mar ahayd goob shaqo oo ku taal woqooyiga Japan, ayaa hoos u dhacday. Ugudambeyn, waxaa jira hal qof oo si joogto ah u adeegsada khadka laba-saldhig: arday dugsi sare ah. Jidadka Tareenka ee Jabbaan, oo qadka ka shaqeynayay, ayaa ogaadey xaaladda seddex sano ka hor. Si kastaba ha noqotee, in kasta oo khadka khadka waxyeelloobey, waxaa la go'aamiyay inuu khadku ku shaqeeyo luminta si markaa ardayga dugsiga sare uusan dhibbane u ahayn. Xitaa imaatinka tareenka iyo waqtiga bixitaanka waxaa loo habeeyay sida ku xusan saacadaha iskuulka. Hal khad tareenka rakaabka ah, oo aan magaceeda la shaacin, wuxuu sii shaqeyn doonaa ilaa qalin jabinta. Astaantan, khadka tareenka ee Japan waa midka keliya ee adduunka.
Saldhig Tareen oo leh Rakaab Rakaab ah
Mashruuca Tareenka Rakaabka Dabaqa u Fure ee Adduunka ee Seattle
Hantida ayaa loo shaqeeyaa tareenka Gemlik oo la dhammeeyey
Wasiirka Gaadiidka Turhan, Sosyal